ရုပ်ရှင်ရုံ HD ကို4အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ရုပ်ရှင်ရုံ HD ကို 4
Excel ကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကော်လံဖျောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဲဒီနောကျအဲဒီဒြပ်စင်မဟုတ်တော့စာရွက်ပေါ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ပြမှာသူတို့ကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါလုပ်ဖို့? ဤပြဿနာကိုကြည့်ကြရအောင်။
ပြပွဲက hidden ကော်လံခင်မှာသင်သည်သူတို့တည်ရှိသည်ဘယ်မှာမှထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ပါ။ Excel ကိုအားလုံးကော်လံနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးသည့်အက္ခရာ၏အက္ခရာနှင့်အတူမှတ်သားနေကြသည်။ အမိန့်စာကို၏မရှိခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ကျိုးသည်နှင့်တစ်ဦးဝှက်ထားသောဒြပ်စင်တည်ရှိသည်ရာအရပ်တွင်။
ဝှက်ထားသောဆဲလ်များ၏ Display ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့တိကျတဲ့နည်းလမ်းများသူတို့ကိုဖုံးကွယ်ရန်အလို့ငှာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်မူကွဲပေါ်မူတည်သည်။
Method ကို 1: လက်စွဲစာအုပ်လှုပ်ရှားမှုနယ်နိမိတ်
သင်နယ်နိမိတ်ရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်ဆဲလ်ဖုံးကွယ်လျှင်, ငါတို့သည်မိမိတို့၏မူရင်းတည်နေရာမှသူတို့ကိုရွေ့လျားအားဖြင့်လိုင်းပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နယ်စပ်ကိုပေါ်မတ်တပ်ရပ်နှင့်ဝိသေသကို double-ခေါင်းနှစ်လုံးမြှားအဘို့အစောင့်ပါ။ ထိုအခါလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်နှင့်ခြမ်းဖို့မြှားဆွဲယူပါ။
ဒါဟာရှေ့အတိုင်းဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်ဆဲလ်, တိုးချဲ့ form မှာပြသပါလိမ့်မည်။
သငျသညျဖုံးကွယ်လျှင်နယ်နိမိတ်ရွှေ့ကြောင်းစိတ်တွင်ဝက်ဝံအလွန်တင်းကျပ်စွာခဲ့ကြသည်သို့သော်, ဤလမ်းအတွက်သူတို့အဘို့ "ဖမ်း" အလွန်ခက်ခဲလျှင်မရမဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများကိုအခြားရွေးချယ်စရာ အသုံးပြု. ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုလားကြပါတယ်။
Method ကို 2: Context Menu က
ဆက်စပ် Menu ထဲမှာဝှက်ထားသောပစ္စည်းများခင်းကျင်းပြသဖွင့်ဖို့သူတို့ဘယ်လိုဝှက်ထားခဲ့ကြသည် options များ၏အကူအညီဖြင့်အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်, ရှိသမျှကိစ္စများတွင်စွယ်စုံများနှင့်သင့်လျော်သည်။
ညာဖက်မီးမောင်းထိုးပြပစ္စည်းများအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Show".
Method ကို 3: တိပ်ပေါ်မှာခလုတ်
ခလုတ်အသုံးပြုခြင်း "Format ကို" အဆိုပါတိပ်အပေါ်အဖြစ်တာဝန်အပေါငျးတို့သဖြစ်ပွားမှုများအတွက်သင့်လျော်သောယခင်ဗားရှင်း။
အဆိုပါ tab ကို Moving "အိမ်"သင်သည်အခြား tab မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ တစ်ဦးက hidden ဒြပ်စင်လည်းမရှိရာအကြား, အိမ်နီးချင်းဆဲလ်မဆိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ Tools များအပိုင်းအတွက်ဖဲကြိုး, တွင် "ဆဲလ်" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို"။ မီနူး။ ဒီ tool box ထဲမှာ "မြင်နိုင်စွမ်း" ကျနော်တို့အမှတ်သို့ပြောင်းရွှေ့ "Hide သို့မဟုတ်ဖော်ပြရန်"။ ပေါ်လာသော list ထဲမှာ, entry ကို select လုပ်ပါ "Show ကိုကော်လံ".
ဤအခြေလှမ်းများပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာ element တွေကိုနောက်တဖန်မမြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်ကော်လံဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဝှက်ထားသောကော်လံကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကဆဲလ်တူညီသောလမ်းအတွက်ဝှက်ထားခဲ့ကြသည်သာလြှငျနယ်စပ်တစ်ဦးကို manual လှုပ်ရှားမှု၏ပထမ version ကိုသင့်လျော်သည်, ထိုမှတပါး, ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်လည်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တွန်းခဲ့ကြသည်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ သော်လည်းဤနည်းလမ်းမကျွမ်းကျင်သူတွေပဲအသုံးပြုသူမှအများဆုံးသိသာသည်။ ဒါပေမယ့်တခြား options နှစ်ခု, လုံးဝနီးပါးမဆိုအခြေအနေမှာဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့အသင့်လျော်သည့်တိပ်ခွေပေါ်တွင် Context Menu ကနှင့်ခလုတ်သုံးပြီးသည်, သူတို့ကတစ်လောကလုံးဖြစ်ကြသည်။
ဗီဒီယို Watch: Cinekorn Entertainment Upcoming Movies 2018 only on Cinekorn Movies. Subscribe Now and Stay Tuned (သြဂုတ်လ 2019).